Swivel Bathroom Mabheji Brush Nickel
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Centerset Yekugezera Faucet Ine Pop-Up Dhonza Gungano
WOWOW Centerset Bathroom faucet nePop-Up Drain Assembly
Rated 4.85 Kunze kwe5 yakavakirwa 26 kasitoma ratings
(26 kasitoma wongororo)
centreset yokugezera faucet nhoroondo:
4-in Center nzvimbo bracket
Metal drain musangano
Ada inoenderana lever inobata nyore kushandisa
Simudza danda rinosanganisirwa
2321400 mirairo yekuisa
Pombi yekugezera yemudziyo wekunyura 2320400 haizombounza matambudziko.
Electroplated ine kupera, iyo yekugezera faucet yechikepe kunyura haambowana oxidization.
Yakagadziridzwa Push & Seal Pop-up drain kuunganidza uye cUPC Inotenderwa faucet yekuparadzira hosi inosanganisirwa.
Yakakwira arc spout inopa kujeka kwakawanda uye kuwedzera kukuru kupinda mune kunyura.
3-gomba brakeki ine 4-inch Centerset dhizaini nyore kuisa. Hole Hukuru: 30-36mm; Kuverengeka kweMax Deck: 30mm.
Mairi lever inobata kune inoyerera kuyerera uye tembiricha controller.
Kuvakwa kwezvinhu zvekuvakisa bramm nickel kupedza kwekusingaperi uye yakavimbika.
SKU: 2321400 Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: 2 Kubata, 4 padiki, Bronze Nickel
Mvura inotonhora / inopisa
Pombi yekugezera / pop up dhureni
Kutanga, ndine makore makumi masere ekuberekwa uye kwete mupombi. Chikamu chakaomesesa cheprojekti kwaive kubvisa mapombi ekare. Mapombi matsva eWOWOW akanaka emhando yepamusoro, mutengo wakanakisa, unokwezva kwazvo, uye zvese zvinodiwa pabasa zvinosanganisirwa izvo zvinoita kuti basa rive nyore kwazvo kuna DIY's. Ndingakurudzira zvikuru chigadzirwa ichi.
Inotaridzika yakakura pamutengo wemutengo. Ini ndinoshuva kuti zita rezita risingaoneke, asi harisi rakakura kwazvo chibvumirano. Iyo nickel yakakweshwa inowirirana neimwe brushed nickel accessories ini yandinayo. Iyo yekuisa yaive yakapusa uye zvikamu zvese zvaisanganiswa.
Yakanaka yakatwasuka isa. Mabatiro anofamba zvakatsetseka, anotaridzika chaizvo. Kuregererwa kwekuwedzera nekuda kwepamusoro pechombo pombi, uye inobvumidza imwe nzvimbo yekuitira zvinhu musinki (kuwacha maoko mbatya, kusuka mabrashi emazino, nezvimwewo) w / o kurova muhombodo, iyo yandinoda; zvinoreva zvinhu zvidiki zvinouya kuti zvibate nekwairi kubuda mvura, saka zvakachena.
Ndakaita kuyedza kwakawanda pamapombi pazvitoro zvishoma zvekuvandudza dzimba uye ndinofanira kuti pombi iyi inoita kunge yakaitwa zvirinani pane iwo anodhura kwazvo. Ndakashamisika. Inorema uye mavhavha anovhurika mushe uye kuvhara nekunzwa kwakanaka futi. Ndakafadzwa kusvika parizvino. Ini ndichave ndichitenga mamwe mashoma maseti eaya munguva pfupi iri kutevera.
inokwanisika, inoyevedza, yakagadzirwa zvakanaka pombi. Zvanga zviri nyore kwazvo kuisa uye kunyangwe maive nemirayiridzo kuitira kuti mugozvida. Ndakagadzirira kuraira zvimwe kutsiva mamwe mapombi ekugezera ari mumba mangu. Chaizvoizvo yakakosha mutengo. Inotaridzika kunge pombi dzinodhura asi dzakachipa zvakanyanya asi havana kupira kuvaka pombi.
Pombi inotaridzika kunge yakanaka. Ndichaodha yechipiri kune imwe yangu yekugezera. Sezvandareva, ndinoda pombi uye iye zvino nedhiraina nyowani, ndinofara ndinopa ichi chigadzirwa CHEMA NEMA.
Mushure mekuverenga wongororo uye tichienzanisa mabhureki isu takatenga iyi yekugezera chikamu kutsiva chedu chekare. Zvaive nyore kwazvo kumisikidza uye zvakapusa dhizaini saka zviri nyore kwazvo kugara zvakachena. Takatenga izvi mune sirivheri sirivheri ichi chinoratidzika chaizvo mushe muchimbuzi chedu.
Nguva pfupi yadarika takatenga imba uye taida kutsiva pombi. Ini ndakatenga izvi uye yaive yakakwana kukwana. Kuuya nezvose zvandaida. Zviri nyore kuisa uye zvinotaridzika chaizvo.
Handizive zvimwe zvekutaura… asi ini ndinoda bhegi iri! Ongororo iyi ndeye yangu yechitatu yeiyi. Ini ndakatenga iyo yekutanga pamusoro pegore rapfuura uye ichiri yakasimba uye yakasimba uye iri nevana mumba! Yakasimudza zvakanaka zvekuti ndakatenga yechipiri. Ini ndanga ndichienda kunotora chimwe chakasiyana kune tenzi yekugezera singi, asi sezvo pombi iyi yanga yakandinakira, uye inoita kunge inodhura, ndakafunga kuti regai ndinamatire nayo! Uye ndinofara kuti ndakazviita. Dai ndaive nesinki yechina, ndaizozvitenga PATSVA!
Kukurumidza kuendesa uye zvikamu zvakashanda zvakakwana. Vakanga vari kusimudzira kukuru kune makumi maviri emakore ere lever, mapombi epurasitiki. Iyo shutoff yakasimba kwazvo isina kudonha chero. Pamutengo, ini handioni kuti munhu anogona sei kurasikirwa nekutenga mapombi aya.
Ini ndainakidzwa nekutenga kweiyi tepi yekugezera. Hunhu hwakanaka kwazvo. Zvaive nyore kuisa uye zvaisanganisira zvikamu zvese zvaunoda kuti uite basa racho. Inotaridzika kuva yakanaka kwazvo uye inowirirana chaizvo neese mamwe mabhurugwa enickel muimba yangu yekugezera. Handina mubvunzo kuti pombi iyi ichagara kwemakore mazhinji.
Petite uye inoshanda yekugezera pombi.
Inokodzera zvakakwana neiyi isina maturo.
Chaizvoizvo iwe unongoda chete maoko ako uye chinogadziriswa wrench. Plumbers putty uye tepi yanga isingadiwe zvachose, hapana kudonha chero. inotaridzika kunge yakanaka uye yakanaka.
Mapombi akanaka, kutarisa kukuru. Ini ndaida akapatsanurwa mabato ekupisa / kutonhora sezvo ndaive ndisina chokwadi chebato rimwe chete risingabude. Nenzira iyi ndaigona kuve nechokwadi chekuti mativi ese akachengetedzwa nemazvo. (uchishandisa pombi tepi ehe saizvozvo) Kuisa kuri nyore. Inoshanda zvakakwana. Mabato anotendeuka kunge mhepo. Kukwana singi yangu zvakakwana. Uye ivo vakatemerwa mutengo. Ndakatenga maviri.
Saka zvakanaka isu takatenga maviri, imwe yega yega yekugezera. Runako. Kutarisa kwakasimba. Ini ndinoda kukwirira kwakaita pombi yekuzadza yedu humidifier.
Iyi ipombi huru pamutengo wakanakisa! Zvakatora baba vangu maminetsi makumi matatu kuti vaite faucets mbiri. Ini ndakaraira chetatu chekushambidza kwedu muenzi uye ndichiri kumirira neshungu murume wangu achitsiva. Isu hatina kana nyaya kusvika parizvino. Ini ndinoda iyo pop up dhureni!
Izvi zvinotaridzika zvakanaka uye mutengo wakanaka. Ndakachinja masinks ese mudzimba dzangu dzekugezera neaya (8 akazara). Inotaridzika kunge yakanaka uye kumisikidza kwaive kwakanangana kune mukomana akaita seni ndichiita pombi basa kekutanga. Iyo inouya ine yakanaka yekumisa iyo zvakare iri nickel uye mhando yemahosi yakanaka.
Bhegi iri rakanakisa. Yakagadzirwa zvakanaka, nyore kuisa, uye inoshanda mushe kwazvo. Iyo pop-drain dhizaini iri nyore kwazvo kuisa kupfuura yekare dhizaini dhizaini zvakare. Ndiri kuzotora mamwe mashoma ekuwedzera mumba.
Nyore kuisa. Inotaridzika kunge yakanaka. Hapana chinoshamisira asi chinotaridzika kunge chakatsetseka. Nyore kushandisa.
Ndakatenga pombi iyi yeimba yedu yekuroja ndikaita kuti mwanakomana wangu aiise. Haana kumboita pombi yekumisikidza asi akaona zviri nyore uye nekukurumidza. Uye zvinotaridzika zvakanaka ku.
Aya mapombi akanaka uye mutengo wakanaka chaizvo. Izvo hazvisi zvakare zvinoshamisira asi kukosha chaiko kana iwe uri kutsvaga kukwidziridza dzimba dzako dzekugezera. Yakanga isina kuomarara zvakanyanya kuisa uye kuita senge yakagwinya uye inoshanda chaizvo
Ndakatenga izvi ndichifunga kuti ndichawana zvandakabhadharira, zvekuwedzera imba yekugezera. Ndine nzira yakawanda kupfuura yandakabhadhara. muchokwadi rinotaridzika uye rinonzwa rakafanana kune rinodhura zita rechikwata chechikwata chandakatengera yekugezera huru. anofara kwazvo. ndichatenga kubva zvakare, kutonga kubva pahunhu wont kuva kwenguva yakareba kunze kwekunge ini ndichida chimwe chinhu.
Kunyangwe paine mutengo unonzwisisika, ichi chigadzirwa chinodarika zvandaitarisira. Zviri nyore kwazvo kuisa uye zvinoshanda uye zvinotaridzika zvakanaka.
Isu tatsiva pombi dzese mune yedu yekugezera dzimba neidzi. Zviri nyore kuisa-nyore nyore kupfuura yekutanga yatakatenga kubva kuchitoro chedu chemahara! Kureba kukuru kwepombi yekugezera futi.
Murume wangu akaisa izvi nekukurumidza, chikamu chakaomesesa chaibvisa chekare. Iwo akanaka uye anorema simbi, ruvara rwakanaka. Mabatiro acho ari madiki diki, asi kukwirira kwepombi kunoigadzirira. Izvi zvakakwana pakukwanisa kushambidza kumeso kwako musinki pasina kuisa chiso chako pasi musinki. Takatenga imwe yevakomana vedu yekugezera, takaida zvakanyanya isu takatengera maviri tenzi wedu.
Ichi chigadzirwa chakanyatsogadzirwa, ini handigare ndichiita ongororo asi ichi chigadzirwa chaive chakasarudzika nekuti chaive nemapombi matsva akasimba achienda pombi. Izvi zvaive zvisingatarisirwi uye zvakafarirwa kwazvo. zvaive nyore kuisa uye hazvidonhedze.